ကိုယ်ဘယ်တားရော့လဲ … | panchitthu
ကိုယ်ဘယ်တားရော့လဲ …	09 Feb 2011 Leaveacomment
ကျွန်တော် က တားရော့ ပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် … အယ်တော့ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတဲ့ တားရော့လေးကို စာဖတ်သူ ပရိတ်သတ်နဲ့ နဲနဲ မိတ်ဆက်ပေးမယ် … နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ သရုပ်ဖော် သင်္ကေတ သတ်မှတ်ချက် ကိုယ်စီနဲ့ လတွေ ကို သရုပ်ဖော်ထားတာ ရှိတယ် … အခုလဲ တားရော့နဲ့ သရုပ်ဖော်မယ် … သင်ဘယ်တားရော့ လဲ သိချင်ရင် ကိုယ်တိုင် အောက်က နည်းလမ်းအတိုင်း တွက်ယူနိုင်ပါတယ် …
The numerological formula for reducing your birthdate to its lowest form is to add month + day + year to come up withatotal. ie:6+ 15 + 1974 = 1995. 1 +9+9+5= 24.2+4= 6. So your card would be 6, The Lovers. Since there are 22 cards, numbered from0to 21, the numbers are added together progressively so that as soon as the total isanumber less than 23, it stops.
Numerologically,0and 22 hold the same meaning and since your birthday will never add up to 0, no matter
တားရော့မှာ မေဂျာကတ်ပြားလေး ၂၂ ခု ရှိပါတယ်။ အဓိက အယ်ဒါနဲ့ ခွဲခြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး သင့်မွေးလ၊မွေးရက်၊မွေးနှစ် ကို
အားလုံးပေါင်းပါ။ဥပမာ 6+15+1986=2007 ၊ 2007=2+0+0+7=9။ ဒါဆိုသင့်ရဲ့ တားရော့က9ဖြစ်ပါတယ်။ 9= THE HERMIT (ရသေ့)
ဆိုတဲ့ ကတ်လေးက သင့်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
The Hermit often suggestsaneed for time alone –aperiod of reflection when distractions are limited. In times of action and high energy, he stands for the still center that must be created for balance. He can also indicate that withdrawal or retreat is advised for the moment. In addition, the Hermit can represent seeking of all kinds, especially for deeper understanding or the truth ofasituation. “Seek, and ye shall find,” we have been told, and so the Hermit stands for guidance as well. We can receive help from wise teachers, and, in turn, help others as we progress.
ဟီးဟီး ကိုယ့်ဘာသာဘဲ ဘာသာပြန် ဖတ်ပေးကျပါနော် … အင်္ဂလိပ်စာ ညံလို့ပါ။
တကယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ မတွက်ချင်ဘူး … ပျင်းတယ် … အွန်လိုင်းမှာဘဲ … တွက်ချက်မယ်ဆိုရင် အောက်က လင့်လေးထဲမှာ အပေါ်ကပုံစံလေး
အတိုင်းထည့်ပြီး အိုကေ ပေးလိုက်ရင် အလိုလို သူ့ဘာသာ တွက်ချက်ပေးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ….
အယ်လင့်လေးကို ကလစ်ပြီး တွက်ချက်နိုင်ပါပြီ … အဆင်ပြေကျပါစေ …🙂
Previous One Click Unicode Installer Next Chrome ကိုမြန်မာဖောင့် ကောင်းကောင်းရိုက်သုံးနိုင်ရန်..